EyeThupha 23, 2018 admin
Bithumb wenza $ 35M inzuzo 2018 nakuba hack
South exchange cryptocurrency Korean Bithumb wenza inzuzo inetha $35 million kwisiqingatha woku-1 kulo nyaka, nakuba rough Juni ukuba inkampani. fey, umenzi imishini video onelungelo 10% of Bithumb, mbule data zemali somthetho South Korean zemali ngoLwesine.
I imvuthuluka karhulumente, ngo 2018, Bithumb eqokelelwe $270 million kwingeniso, nge $194 million ngenzuzo yokusebenza. Ngexesha i data ye xesha kunyaka ophelileyo alukho, Yonhap uthe Bithumb wenza $380 million ngenzuzo net in 2017 kuphela, engaphezulu kwe 10 amaxesha inzuzo bawo nyaka-kude. Kuye zasehlotyeni onamatye for Bithumb kangaka kude. Le iqonga ubunzima kukophula enkulu ngoJuni kangangokuba wabona ngeenxa $31 million cryptocurrencies ezibiweyo - nangona kamva bazibiza ukuba clawed umva $14 million. Yinto akucaci ukuba loo mcimbi ngayo amanani yokuqala-isiqingatha zichazwa kakhulu okanye ukuba iindleko ziya kwabeka ixesha accounting kamva.
ProShares Bitcoin ETF ukulahlile
I Securities and Exchange Commission ukhuphe rejections ukuba Bitcoin izindululo ETF evela ProShares, Direxion and GraniteShares. Xa umyalelo epapashwe kwi-Agasti 22, amagosa e-arhente wabhala ukuba balahle izindululo. Kuyaphawuleka, a ETF Bitcoin wayeza kuba imveliso yokuqala exchange-wasebenza hlobo kwi US. Le rejections beza phambili zokugcina ingxelo ngaphambili ukusuka kwinkqubo imvume umzuzwana kaThixo. Kuyaphawuleka, iarhente wasebenzisa ingqiqo eyiyo enye - kunye namazwi - kuzo zonke rejections. I-arhente wabhala: ” iKhomishini le wokungalivumi ngenxa (ikhale) ingakumbi imfuneko yokuba imithetho a Securities Exchange wesizwe ziyilwe ukunqanda izenzo zenkohlakalo noluqhathayo kunye nezenzo.”
I Ima wagxininisa ukuba “ugxininisa ukuba angakholiswa lawo lingakuphumlanga uphononongo ukuba Bitcoin, okanye ubuchwepheshe blockchain jikelele ngakumbi, has eluncedo okanye ixabiso njengento ezintsha okanye utyalo-mali.” Kubangel 'umdla ukwazi ukuba 10 imali ezinxulumene-Bitcoin njengangoku esikalini ngamagosa umzuzwana. I-arhente ukuba ndinikhululele izigqibo zayo ngaphambi elimisiweyo layo elimisiweyo (njengoko Ima le veki). Kodwa imizekelo ezidlulileyo zibonisa ukuba umzuzwana uya kukha alinde de isondele imihla esikiweyo, & mhlawumbe “izinqumo zephanting,” konke kodwa nokuqinisekisa ezongezelelweyo nail-ukuleqa luluntu ze crypto.
Ingxelo Daily Market Kraken for 22.08.2018
$144M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Bots Trading for Cryptotrading
Post Previous:Blockchain News 22.08.2018